Ihe ọhụrụ Xiaomi Mi 5s ga-enwe ihuenyo 5,5-inch | Gam akporosis
Ntughari ohuru na-egosi na Mi 5s ga-enwe ihuenyo 5,5 ″
3 ụbọchị gara aga anyị nwere ozi ọma metụtara Xiaomi Mi Nyocha 2, ọzọ nke igwe nke ga-abata na nso nso na ọtụtụ ndị ọrụ na-eche mgbe nnukwu na mbụ Mi Note. A Xiaomi nke ka egbochi na nyocha ahụ maka ike ịgbatị aka gị gafee China. Ọ bụ ezie na ị ga-ekwu eziokwu, site na Amazon, onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịnweta nzụta nke otu ọdụ ya dị ebube.
Site na Xiaomi Mi 5 anyị nwere Hugo Barra n'onwe ya na-eweta ya na MWC 2016 emere na Barcelona na mbido afọ ahụ. N’ọnwa gara aga, anyị nwedịrị ohere ịchọpụta na Xiaomi ga-arụ ọrụ onye nọchiri Mi 5 nke a na-akpọ Mi 5s. N'oge ahụ, e kwuru na ekwentị ọhụrụ ahụ ga-aha nha na ihuenyo ahụ. Ugbu a bụ mgbe anyị nwere akụkọ ndị ọzọ na-agọnahụ ozi ahụ.
Dika onu ohuru a si kwuo, ihe eji mara Mi 5s bu inwe a ihuenyo buru ibu na 5,5 sentimita asatọ. Ya mere, anyị na-echigharịkwuru ụdị ọzọ dị elu maka Xiaomi maka ndị ọrụ ahụ chọrọ ntakịrị ohere na ihuenyo ha iji nwee ọ contentụ na ọtụtụ ọdịnaya nke a na-akpọkarị site na ngwaọrụ ndị a na-akpọ phablets.
Nkọwa ndị ọzọ ekpughere banyere ehi ehi ahụ, nke kwekọrọ na akụkọ ọnwa gara aga, gụnyere a Mkpebi ihuenyo zuru ezu HD, Snapdrgon 820 mgbawa, 6 GB nke Ram na a mkpisiaka ihe mmetụta, nke ikpeazụ a bụ isi akụrụngwa ọ bụla nke ekwentị na-oru na nso nso a.
Mi 5s ga - enwe atụmatụ akpọrọ Ike Touch, nke na-enye ohere ka ngwaọrụ gosipụta ihe dị iche na nke na-enwusi ike. Anyị ga-ahụ mgbe ọ chọrọ ịmalite ngwaọrụ ọhụrụ a ma ọ bụrụ na ọ ga-abata n'otu oge ahụ ihe ọhụrụ Xiaomi Mi Note 2.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Ntughari ohuru na-egosi na Mi 5s ga-enwe ihuenyo 5,5 ″
Xiaomi Mi Band 2 ga-aga ire ere mepee na Ọktọba
A na-emelite ngwa Audible site na ike ịkekọrịta obere vidiyo, ọwa edoziri na ndị ọzọ